iPad Pro, Magic Keyboard ary Pitaka MagEZ Case, ny fitambarana tonga lafatra | Vaovao IPhone
iPad Pro, Magic Keyboard ary Pitaka MagEZ Case, ny fitambarana tonga lafatra
Luis Padilla | 20/03/2021 14:00 | iPad Pro, maro
Notsapainay ny tranga fiarovana an'i Pitaka MagEZ Case, ny lalao mety indrindra ho an'ny iPad Pro miaraka amin'ny Magic Keyboard, manome anao fiarovana lehibe kokoa nefa tsy very ny tombony rehetra amin'ny keyboard Apple.
Ny Apple Magic Keyboard no famenony tonga lafatra amin'ny iPad Pro. Kitendry feno izay mifamatotra amin'ny iPad amin'ny iPad, tsy mila haverina, haverina amin'ny laoniny ary miaraka amina multi-touch trackpad, izay zara raha manampy hatevin'ny iray manontolo. Saingy ny endriny minimalista dia misy ny fatiantoka, ary toy ny mahazatra dia avy amin'ny lafin'ny fiarovana izy ireo, satria ny aoriana sy ny iPad aloha ihany no karakarainy, mampiharihary tanteraka ny endriny aluminium. Ahoana ny tranga iray izay hiaro an'io rafitra io nefa tsy manaisotra na inona na inona amin'ny Magic Keyboard? Eny, izany indrindra no ataon'ny MagEZ Case de Pitaka.
Vita amin'ny Aramid, tranga maivana sy manify izy io, saingy manome antoka fiarovana tsara ho an'ny iPad amin'ny toerana ilanao azy indrindra. Ny tranga dia mifanaraka amin'ny hoditra faharoa amin'ny iPad Pro, ary toy izany dia tsy manelingelina mihitsy ny fametrahana ny Magic Keyboard, izay mitohy mifamatotra amin'ny hery manetsika mitovy tsy misy azy. Ankoatr'izay, ny mpampitohy marani-tsaina dia mijanona ho miasa tanteraka, noho izany dia hivoatra toy ny mahazatra ny kitendry Apple.
Ny MagEZ Case dia mitanisa ny Frame iPad iray manontolo ankoatry ny lafiny apetraka amin'ny sisin'ny Magic Keyboard. Ireo mpandahateny sy mpampitohy USB-C dia manana ny toerana sahaza azy ao anatin'io tranga io, ary rakotra ny bokotra fa misy fikasihana malefaka. Ny lamina haverina ao ambadika dia manome endrika maoderina azy. Tranga iray izay noho ny fahafaham-ponao afaka manala azy amin'ny Magic Keyboard, dia tsara ho an'ireo fotoana ireo raha te hampiasa ny iPad ivelan'ny keyboard-nao ianao, tsy misy tahotra ny hanakorontana ny tampon-tany na ny rano indray mitete kely mety hanimba ny takelakao.
Rehefa milaza izahay fa tsy misy antsipiriany mijanona amin'ny fampiasa amin'ny iPad sy Magic Keyboard, dia tsy manitatra. Manarona ilay faritra natao hamerenana ny Apple Pencil ilay tanany, saingy manify be izy io ka afaka manohy mametaka azy amin'ny rindrambaiko iPad Pro ary mamerina mamerina azy io, toy ny hoe tsy nanao na inona na inona tamin'ny iPad isika. Ny firaisan'ny andriamby dia zara raha mihena ny heriny, na dia anisan'ireo mankahala aza ianao fa mijanona ao anaty kitapo ny Apple Pencil isaky ny esorinao ny iPad ao anaty kitapo, na matahotra ianao sao hampidininao rehefa entinao izany. eny an-dalambe dia ho tianao ny fitaovana manaraka.
Pitaka dia manolotra miaraka amin'ny MagEZ Case, ho toy ny fitaovana fanampiny, mpihazona karatra izay manidy ny manidy ny iPad-Magic Keyboard set ary mitazona ny Apple Pencil koa mba tsy hianjera. Ao amin'ny slot-ny dia afaka mitondra karatra roa ianao, mba hanananao azy ireo hatranyAry manana fiadanan-tsaina goavambe ianao fa ny Apple Pencil dia hijanona eo amin'ny toerany na inona na inona ataonao. Ny mpamorona karatra dia tsy mavitrika, mifatotra noho ny endriny miendrika clip, ary miraikitra sy esorina afaka segondra vitsy monja.
Ny fiarovana atolotry ny Magic Keyboard ho an'ny iPad Pro dia tsy ny hatsarany lehibe indrindra, ary ity MagEZ Case avy any Pitaka ity no vahaolana mety indrindra. Mazava, manify ary saika tsy voamarika, dia manampy fiarovana fanampiny amin'izay ilainao azy: ny frame. Ny fifandraisana magnetika amin'ny Magic Keyboard dia tena tsara, ary ilay iray ahafahanao mameno ny Apple Pencil hatrany, antsipiriany iray. Raha mameno azy miaraka amin'ny mpihazona carte clip izay azo vidiana misaraka ianao dia manana ny filanjana tonga lafatra hitondra ny iPad Pro na aiza na aiza. Ny vidin'ny MagEZ Case dia $ 69,99 amin'ny maodely rehetra (iPad Pro 12,9 ″ sy 11 ″, iPad Air 10,9 ″). Azonao atao ny mividy azy amin'ilay rohy mankany amin'ny tranokala Pitaka: rohy. Ny vidin'ny clip karatra dia $ 28,99.
Navoaka tamin'ny: Diaben'ny 20 tamin'ny 2021
Fanovana farany: Diaben'ny 20 tamin'ny 2021
Maizina sy mahia
Mitazona ny fahombiazan'ny Magic Keyboard
Mamela ny famerenana pensilihazo Apple
Tena azo ampiharina clip kapila tsy azo ampiharina
Mifanaraka amin'ny iPad Pro 2018 sy 2020
Misy amin'ny loko iray ihany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » iPad Pro, Magic Keyboard ary Pitaka MagEZ Case, ny fitambarana tonga lafatra
Apple sy Faze Clan dia mandefa fanontana manokana Powerbeats Pro
Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 14.4 taorian'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny iOS 14.4.1